Xirfadaha Horudhaca ah ee Proton-ka - Shucaaca Oncology - Proton California
Daryeelayaasha Kansarka Proton Therapy ee San Diego
Isbeddel Samee Maalin kasta
Markaad isku keento qaar ka mid ah khubarada kansarka adduunka ee khibrada u leh goobta daaweynta ee proton iyo tikniyoolajiyadda goynta sare, waxaad heleysaa goob shaqo oo laser ah oo diirada saareysa sidii loo weerari lahaa kansarka oo aan la qiyaasi karin iyo natiijooyinka. Laga soo bilaabo ka-hawlgalayaasha caanka ah ee caanka ku ah shucaaca indhaha ee shucaaca ku takhasustay shucaaca indhaha ilaa shaqaalahayaga caafimaad ee tababaran iyo shaqaalaha xafiiska oo ka dhiga xarunteenna suurogal, kooxdayada daryeelka bukaanka waxay u shaqeeyaan si iskaashi iyo naxariis leh si ay u keenaan rajo iyo bogsiin bukaannadeenna maalin kasta iyo maalin kasta. Haddii aad xiiseyneyso meherad xarun lagu daweeyo kansarka oo leh koox firfircoon oo xiiso u leh ka caawinta dadka inay u dagaallamaan mustaqbal wanaagsan, California Protons ayaa kuu noqon karta meesha kuugu habboon.
Mushkiladaha xiisaha leh waa inay dalbadaan halkan.
In laga takhaluso xitaa kansarada aadka u dagaal badan iyadoo la siinayo daryeel aan la isku halleyn karin oo ku takhasusay kansarka caanka ah iyo dhakhaatiirta kuwaas oo soo jiita 50 sano oo waayo-aragnimo isku dhafan ah iyo awood u leh tikniyoolajiyadda teknolojiyadda casriga ee farshaxanka.
Waxaan ku kala qaybsannahay daryeelka bukaanka iyo u doodista
Waxaan ku soconaa dadaalkeenii raadinta dawaynta, annagoo qaadanayna xitaa kiisaska kansarka ee ugu adag
Waxaan ka dhigeynaa bedel, daaweyn-gooyo proton-ka oo loo heli karo bulshada iyo wixii ka dambeeya
Waxaan nahay wadarta dhamaan qaybahayada - dhakhaatiirta, shaqaalaha rugaha caafimaadka iyo xubnaha kooxda howlaha ganacsiga si isku mid ah. Markii aan si wada jir ah u wada shaqeyno, waxaan awoodnaa inaan gaarsiino heerka ugu sarreeya ee daryeelka kansarka bukaannadeenna
Waxaan gaarsiinaa daryeel shaqsiyeed, naxariis leh, waxaan kuula dhaqmeynaa bukaan kasta heer isku mid ah oo walaac iyo xushmeyn ah sida aan sameyn laheyn hadii aan ula dhaqmeyno xubin kamid ah qoyska ama saaxiib.
Waxaan aqoonsannahay doorkeena muhiimka ah ee bulshada waxaanan si joogta ah uga shaqeynaa sidii aan u dhisno una wanaajin laheyn xiriirada noo saamaxaya inaan u adeegno bulshada iyo wixii ka dambeeya
Miisaaniyadda iyo mas'uuliyadda hawlgalka
Waxaan si adag ugu foogannahay sidii aan u joogteyn lahayn hawlgal daacad ah, mas'uulna ka ah arrimaha masiirka leh
California Protons waxay bixisaa xirmo faa'iidooyin aad u sarreeya, oo ay ka mid yihiin mushaharka tartanta, caafimaadka, ilkaha, aragga, caymiska nolosha, naafanimada muddada-gaaban iyo muddada dheer, kharash is beddelka, u dhigma 401 (k), qorshaha qaniga ah ee PTO, iyo fursadaha kobcinta gaarka ah.
Haddii aad xiisaynayso inaad ku biirto kooxda kobcaysa ee ku taal California Protons, dalbo halkan.